Baahin: Salaasa, Nov 29, Maxamed C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. Afhayeenka baarlamaanka federaalka oo lagu eedeeyey ku xad gudub & ku tarki fal xileed; Wafti reer Puntland ah oo ka qayb galay shirkii ururada bulshada rayadka ah ee Road-mapka oo ku soo laabtay Garowe; Garaad C/llahi Cali Ciid ayaan ka waraysanay; R/wasaare Gaas oo kulamo la yeeshay madaxda dalka Qadhar; afhayeenka xukuumada ayaan ka waraysanay. – Radio Daljir
Nofeembar 29, 2011 12:00 b 0
Golaha ammaanka & hay?addaha gargaarka oo walaac ka muujiyay musiibo bini?aadatinimo oo ka dilaacda gobollada Al-shabaab ay ka mamnuuceen.